जनता बैंकको १४.४ प्रतिशत बोनस सेयर पारित, सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित  BikashNews
जनता बैंकको १४.४ प्रतिशत बोनस सेयर पारित, सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित
२०७४ पुष २८ गते १८:०५ विकासन्युज
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको १४.४ प्रतिशत बोनस सेयर पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको आठौँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
सभाले पारित गरे बमोजिम बैंकले सेयरधनीलाई आ.व. २०७३/०७४ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको १४.४ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । उक्त बोनस सेयर पछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगको छ ।
गत आवमा साविकका जनता बैंक नेपाल लि., त्रिवेणी विकास बैंक लि. र सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लि. एक आपसमा गाभिएर बनेको यस जनता बैंक नेपालको मर्जर पछाडीको यो पहिलो वार्षिक साधारणसभा हो । यस साधारण सभाबाट ६ जना नयाँ संचालक समितिको सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।
साथै, आर्थिक वर्ष भित्र मर्जर पश्चात दोहोरिएका शाखाहरुको स्थानान्तरण तथा थप नयाँ शाखा समेत गरी शाखा संजाल १२४ पुर्याउने लक्ष्य बैंकको रहेको छ । बैंकको हाल ५२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप र ४८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा कारोबार रहेको छ ।